Wazi njani ukuba uza kuba nenkqayi-Ingcebiso kuMadoda aneSitayile | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, Kufanelekile, Isitayile esinenwele, ZeMpilo
Namhlanje inzululwazi iguqukele kwiinkalo ezininzi, ezinje ngeengxaki zokuba nenkqayi okunike amadoda iintloko. Kungenxa yoko le nto kukho unyango lokulibazisa ukuwa kwakho nditsho nokomeleza iinwele. Kwicandelo lethu sinokufumanisa ngezinye iinkqubo kunye neempawu zendlela yokwazi ukuba uza kuba nenkqayi.
Nangona kunjalo ayisebenzi i-100% ngokukuko Kusenokubakho ixesha lokuphumelela iminyaka embalwa. Ifomula yayo ifunyanwa ngokufumanisa ukuba yintoni i-DNA yakho emiselweyo ukuba kunokwenzeka ukuba ube nempandla kwixesha elizayo. Olunye uhlobo lonyango, kuhlala kucetyiswa ukuba uphile ubomi obunempilo.
1 Wazi njani ukuba uza kuba nenkqayi?
1.1 Ngovavanyo lweDNA
1.2 Iimpawu zokuqala kunye neempawu
2 Ngaba akhona amadoda akhuselwe ngakumbi kwinkqayi?
Wazi njani ukuba uza kuba nenkqayi?
Ngaphandle kwamathandabuzo owona mzekelo mhle kukujonga iingcambu zethu ukuba sivavanye ukuba unokuba nenkqayi ngenxa yezizathu zofuzo. Imfuza emisela ukulahleka kweenwele ifunyanwa ikakhulu kumama notata kwaye ukukhula kweenwele kumiselwa ziijeni ezininzi ezahlukeneyo. Ke ngoko, indibaniselwano yakho inokuba yodwa kwaye kungafuneki ukuba ilandele ipateni efanayo njengabantakwenu.
Kukho oogqirha abakhethekileyo abaqokelela iisampulu zeDNA ukusuka ematheni ukumisela indlela esinokuba novakalelo ngayo kwihomoni eyenziwe yi testosterone: dihydrotestosterone.
Ukuba uhlalutyo lubonisa uvakalelo ngakumbi kule hormone unokuba sengozini yokulahleka kweenwele. Kukho amadoda afikelela kwiminyaka engama-40 ubudala ngentloko yeenwele, kuba kunjalo uvakalelo lwakho DHT yiba ncinane. Le sampulu inokumisela kwaye iqikelele ukuba angaphendula njani loo mntu kwiindidi ezithile zamayeza ezimiselwe ukulahleka kweenwele.
Iimpawu zokuqala kunye neempawu
Kukho oogqirha abathi ayisiyiyo imvakalelo yakho kuphela kwi-DHT emisela ukuba uqhelekile ekulahlekelweni ziinwele, kodwa iya kuthi ichonge iihormone ezizuzwe njengelifa. Iimpawu zokuqala zinokuvela kwiminyaka engama-20.
Indoda enye kwabahlanu ifumana le miqondiso kuloo minyaka. Njengoko bekhula, ipesenti iyanda, kubudala beminyaka engama-30 ibaluleke ngakumbi kwaye inkqubela phambili njengoko amashumi eminyaka edlula. Umkhondo weenwele uya kuhlala kumqamelelo xa uvuka okanye kuya kubakho iinwele ezishiyekileyo kwigumbi lokuhlambela ngaphezulu kweeshawari.
Ukuphulukana noxinano lweenwele kwisithsaba Olunye lweempawu ezibonakalayo, apho iinwele ziya kuthi gqolo ukuwa kude kube lula indawo. Enye indawo ebaluleke kakhulu yinxalenye yokungena, xa beqala ukuqaphela ukuba ibunzi liya lisanda ngakumbi nangakumbi.
Kukho amadoda nawo anamava amabala anenkqayi, kwezinye iindawo zesikhumba sakho, apho ixesha lihamba kancinci zikhula. Iya kuqala ngobume bengqekembe kwaye iya kuxhomekeka ekubeni iyaqapheleka na okanye ayixhomekekanga kubungakanani beenwele eziyingqongileyo kwaye iya kukhuthaza umahluko wayo ngakumbi.
Ngaba akhona amadoda akhuselwe ngakumbi kwinkqayi?
Sele simisele ukuba into emiselweyo yimfuzo. Asinakukufumanisa njani ngeliso lenyama amadoda amaninzi angena i-physiognomy yokuba neenwele ezininzi. Le datha ibalulekile kuba iinwele ezininzi onazo kwisentimitha yesikwere entlokweni yakho, kokukhona uya kujongeka njengenkangeleko yangaphandle elungileyo ye-capillary ixesha elide.
Ukuba iinwele zakho zininzi kakhulu Kuya kufana nokugcinwa kweenwele ngamandla angaphezulu. Okwangoku, ukukwazi ukuwela iileya ezinemicu ezivelisa impandla kwaye ke ayizukubuthathaka ngokulula kakhulu ngenxa yokuncipha kwayo.
Nangona kunjalo, le miqondiso ihamba ngokuthe ngcembe kwaye amadoda amaninzi ngokusebenzisa le miqondiso angathatha amayeza aza kubanceda bafumane Unyango olusebenzayo lokukwazi ukuluyeka. Unonophelo lomntu lubala kakhulu.
Indoda eza kukhathalela ilahleko yayo enokubakho kufuneka khokelela kubomi obunoxinzelelo kakhulu. Ukuziqhelanisa nemidlalo ekhatshwa kukutya okufanelekileyo kuya kuba yinto ephambili kwimpilo entle eya kuthi ibonelele ngomzimba wonke.
Abanye oogqirha ungakukhuthazi ngamandla ukusetyenziswa kwamayeza athile, ezinje ngehomoni yonyango, iipilisi zoxinzelelo, okanye iipilisi zoxinzelelo. Amachiza oxinzelelo lwegazi okanye izongezo eziqukethe i-creatine zikwabangela ukuba imveliso ye-DHT inyuke.
Ngokukwanjalo kufuneka uphephe ukugqithisa, Akulunganga ukutshaya okanye ukusela utywala, kuba zingunobangela wazo ukuwohloka kwamandla kunye namandla ezinweleni. Xa uhlamba iinwele, kulula ukuyiphatha kakuhle, ngaphandle kokusebenzisa nayiphi na ishampu enobundlobongela kunye ngaphandle kokunyanga ngomsindo entlonzeni. Unokufunda iingcebiso zethu "Kukangaphi kufuneka uhlambe iinwele zakho."
Ukuba ufuna ukufunda izihloko ezinxulumene noko ungangena iposti yethu malunga "Ezona nwele zilungileyo zamadoda anempandla". Okanye usebenzise nini micropigmentation njengenye indlela yokufihla ukungabikho kweenwele entlokweni yamadoda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Wazi njani ukuba uza kuba nenkqayi
Ukwazi njani ukuba uza kuba nenkqayi xa umncinci
Yintoni enokuyenza xa kuqhuma i-hemorrhoid